Semalt: Fomba 5 hanamafisana ny fandalinana SEO amin'ny web scraping
. Amin'ny alàlan'ny tranonkala , dia azo atao ny mamadika ny tranonkalan'ny mpifaninana mba hamolavolana ny paikady hanalany azy ireo. Na mila mametaka ny lohateny, meta na ny teny fanalahidy ianao, dia tokony hampiasa ny votoatiny havanana mba hahazoana ny asa vita.
Ireto misy fomba 5 samihafa mba hanamafisana ny fanadihadiana SEO amin'ny tranonkala.
1. Ny Keyword Analysis an'ny mpilatsaka an-tsitrapo:
Azonao atao mora foana ny manaparitaka ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao ary mahazo ny votoatiny amin'ny fanadihadiana maotina - ameliyathane bonesi erkek giyim. Ho an'ity tanjona ity, afaka mampiasa SEMRush ianao ary hikaroka ireo teny manan-danja mety. SEMRush dia fanazavana rakotra angon-drakitra . Amin'izany, azonao atao ny mamaritra ny dikan'ny teny hoe mpifaninana aminao. Azonao atao ihany koa ny mahita ny teny malaza sy ny lava-pitenenany ary ny tranonkalanao dia miditra amin'ny fomba tsara kokoa.
2. Ny fampisehoana ny pejy:
Ny fitaovana sy serivisy samihafa SEO dia mifantoka amin'ny sehatra sy teny fototra ho an'ny laharana tsaratsara kokoa. Zava-dehibe ny ny angon-drakitra hanatsarana ny fahombiazan'ny pejy Internet anao. Te-hitondra fiara bebe kokoa amin'ny tranokalanao na blôginao ve ianao? Ny Google AdWords API dia fitaovana tena tsara izay manala ny angon-drakitra sy manaparitaka mora foana ny tranonkala. Ankoatra izany, manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny tranonkalanao izany ary mampitombo ny isany.
Kimono Labs sy Import. io dia fitaovana roa miavaka amin'ny tranokala . Manampy amin'ny famoahana ireo meta-data izy ireo ary mampifanaraka mora foana ny tranonkala. Raha te hahalala ianao hoe nahoana ny tranonkalan'ny mpifaninana no tsara kokoa noho ny anao, dia azonao atao ny manandrana ny iray amin'ireo fitaovana ireo ary hahita ny teny fanalahidy sahaza ho an'ny tranokalanao. Amin'ny import. io sy Kimono, afaka mamoaka mora foana ny famaritana meta, meta titles, ary meta ianao ary afaka manatsara ny fahombiazan'ny tranonkalanao.
4. Fametrahana tranonkala ho an'ny seho an-tsoratra:
Ny tanjon'ny SEO dia ny hampitombo ny laharan'ny pejy ho an'ny teny fanalahidy nomena. Ny webmasters rehetra dia mila SEO tranokala izay afaka manampy azy ireo hanatsara ny fahombiazan'ny tranonkala. Raha vantany vao voatsikera tanteraka ny angon-drakitra, azonao atao ny mamoaka azy ao amin'ny bilaoginao ary mitondra fiara mifototra amin'ny kalitaony. Azonao atao ny manandrana Scrapy, fitaovana fanangonana tahirin-kevitra izay manala fanazavana avy amin'ny tranonkala samihafa nefa tsy manova ny teny fototra tianao. Ny fomba iray hampitomboana ny laharana dia ny hahita ny zavatra ataon'ireo mpifaninana aminao sy ny fakana sary ny tranonkala.
5. Rohy anaty sy ivelany:
Azo antoka ny filazana fa ny tranonkala sy ny SEO dia manana fifandraisana matanjaka. Ilainao foana ny rohy anatiny sy ivelan'ny toeram-piofanana tsara kokoa. Amin'ny Findleft, ParseHub sy OutWit Hub, tsy vitanao ny mitsikilo sy mamoaka ny pejy ao amin'ny tranonkalanao fa manangana rohy anaty ao anatiny.
Miaraka amin'ny fitaovana fanarabiana ao amin'ny tranokala, azonao atao ny mamaritra mora foana ny habetsahan'ny teny ampiasain'ny mpifaninana aminao. Tokony hisy isa maromaro amin'ny teny manan-danja ao amin'ny votoatinao, ary afaka manampy amin'ny fisorohana ny teny fanalahidy. Ankoatra izany, azonao atao ny manisy rakitra mahasoa avy amin'ny horonan-tsary sy sary. Amin'ny alalan'ny karazana fitaovana maoderina mipoitra , dia afaka mamoaka mora foana ny fampahalalana avy amin'ny sary sy horonan-tsary ianao ary afaka manatsara ny lalao. Raha fintinina, ny fanalana ny tranonkala sy ny SEO dia afaka manampy amin'ny fahatakarana ny maha-mpifaninana anao amin'ny toerana ambony amin'ny valin'ny fikarohana.